Jubbaland oo war ka soo saartay kulankii James iyo Axmed Madoobe – Hornafrik Media Network
Jubbaland oo war ka soo saartay kulankii James iyo Axmed Madoobe
War qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland ayaa lagu sheegay in Axmed Maxamed Islaam uu maanta Aqalka martida ee magaalada Kismaayo ku qaabilay wakiilka gaarka ah ee Xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan.
Xubno ka kala socday Midowga Yurub, Midowga Afrika iyo Urur Goboleedka IGAD waxaana ayaa James Swan ku wehliyey safarkii uu maanta ku tagay Kismaayo, waxyna dhinacyadu ka wada hadleen arimaha doorashooyinka 2020, khilaafka dowlada federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah, cafinta daynta lagu leeyahay Soomaaliya, dhamaystirka dastuurka dalka iyo qodobo kale.
Dhinaca Jubbaland ayaa waxaa kulankan Axmed Madoobe ku wehelinayay Madaxweyne ku xigeenka labaad Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud iyo xubno ka mid ah golahiisa Wasiirrada.
Madaxweyne Axmed Madoobe oo ka hadlay dayn cafinta dalka ayaa sheegay inay ahmiyad weyn u leedahay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, isla markaana ay ka shaqaynayaan sidii arintaas ay miro dhal u noqon lahayd.
Sidoo kale Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay shacabka Soomaaliyeed inay wax ka ogaadaan hanaanka loo marayo deyn cafinta dalka.
Taliye xigeenka xoogga dalka oo la dar-daarmay Macawiisley